SONGZ Nhoroondo | Songz Mota Inodzora Mhepo Co., Ltd.
SONGZ AUTOMOBILE AIR KUSVIRA CO., LTD. rakaumbwa Shanghai.
SONGZ yakatanga kubva bhazi air conditioner bhizinesi, uye kutanga kubva zero.
Xiamen SONGZ yakagadzwa, iyo yakatarisana neR & D, kugadzirwa kwemabhazi emhepo mamiriro ekugadzirisa.
Mugore rimwe chetero, SONGZ mutyairi wemotokari mamiriro ekumisikidza yakavambwa, ichizvipira muR & D, kugadzira & kushambadzira kwemutyairi wemotokari yemotokari, HVAC uye zvimwe zvakakosha zvikamu.
SONGZ air conditioning bhizinesi raikura gore negore.
Shanghai SONGZ Yechipiri fekitori yakapera, iyo yakagadzirirwa senzvimbo yakazara yekugadzira mabhazi uye mota mhepo inodziya zvikamu.
Anhui SONGZ yakagadzwa, inova mubatanidzwa pakati peTUMZ neJAC.
Chongqing SONGZ yakagadzwa. Chongqing SONGZ yaive yakanangana nekugadzirwa kwemotokari yemhepo.
SONGZ yakazivikanwa neShanghai Science uye Technology Committee sebhizinesi repamusoro soro reShanghai.
Mugore rimwe chete, SONGZ yakapihwa neShouqi Group seBeijing Olimpiki "Service Champion" yekuita kwakanakisa uye basa rekutsigira panguva yeBeijing Olimpiki.
Chitupa che High-tech Enterprise yeShanghai
Beijing Olimpiki "Service Chikwata"
Zvikamu Shanghai SONGZ Railway Air Conditioning Co., Ltd. yakagadzwa, ichizvipira muR & D, kugadzira & kushambadzira kweye njanji yekufambisa mweya conditioner.
Iine makore anopfuura gumi ekuvandudza, SONGZ ine dzakasiyana siyana AC mhando dzemotokari dzenjanji, senge AC ye locomotive, chitima, monorail, metro (subway, underground) tram zvichingodaro.
SONGZ yakanyorwa muShenzhen Stock Exchange (kodhi yemasheya: 002454) uye yakave yekutanga kambani yakanyorwa muChina yekufambisa mota yemhepo indasitiri.
Mugore rimwe chete, SONGZ yakapihwa seyekunze-yakabhadharwa mari yehunyanzvi bhizinesi.
Beijing SONGZ uye SuperCool (shanghai) Refrigeration Co, Ltd. zvakasimbiswa.
Beijing SONGZ yakazvipira mukugadzirwa kwemhepo inodzora masisitimu emota dzevanofamba.
Supercool mubatanidzwa pakati peboka reTIMZ neCIMC (China International Marine Containers Co., Ltd, inova ndiyo midziyo mikuru yemumvura inogadzira pasi rose.) Supercool inozivikanwa muR & D, mugadziri uye kushambadza kwehuwandu hwakazara hwearori mafriji mayunifomu ketani inotonhora.
Liuzhou SONGZ yakagadzwa, ichizvipira mukugadzirwa kwemhepo yekugadzirisa mamiriro eMPV, SUV, mota nemota yemagetsi.
Shanghai SONGZ yechitatu fekitori yakapera, inova iyo HQ yeboka reTUMZ. Izvi zvakare zviri zvemberi zvakangwara uye zvakangwara zvekugadzira base yemota mayunitsi emhepo mayuniti, bhazi mweya unodziya mayuniti, air conditioner compressor uye yemagetsi compressor, uye zvimwe zvikamu.
Indonesia SONGZ yakagadzwa. Iyi yaive SONGZ yekutanga mhiri kwemakungwa fekitori, inova nhanho yekutanga yeTINGZ kudyidzana kwenyika, ichiteverwa naLumikko kuFinland.
SONGZ yakawana uye yakabata zvikamu zveSuzhou NTC, Beijing Shougang Foton neFinland Lumikko.
Suzhou NTC inozivikanwa bhiza rebhazi air conditioner mumusika weChina. Nekutora, SONGZ neNTC vakaita mubatanidzwa wakasimba mumusika wehunyanzvi, zvigadzirwa, kutengesa, sevhisi.
Lumikko, inozivikanwa brand muEurope uye iri yemhando yepamusoro inogadzira tembiricha yekudzivirira matiraki ematiraki nematrailer. Iyo yekuchengetedza poindi system ine yakasimba yekutarisa n Nyika dzeNordic.
SONGZ yakatangisa makore makumi maviri uye yemamiriro ekunze mhepo tanera nzvimbo yakavambwa.
Mugore rimwe chete, SONGZ yakagadzira nhoroondo nekugadzira zvinopfuura zviuru gumi (zviuru gumi) zvebhazi air conditioner mumwedzi mumwe chete muna Mbudzi.
SONGZ yakapihwa muhuwandu hwema 54,049 mayuniti ebhasi air conditioner kumusika weChina nenyika dzekunze, kusanganisira zvikamu makumi matatu nezviviri nemakumi matatu nemakumi matatu nezvitatu zvemagetsi emagetsi emabhazi emagetsi muna2018.
SONGZ YEMAHARA DZOKUDZIDZA CO., LTD. yakagadzwa, yaive iri imwe nhanho yekudyidzana kwenyika kweTIMZ.
Mugore rimwe chetero, SONGZ yakazivisa zano rekumisikidza rese sevhisi network nekuve neanosvika zana maresitoreti epasi rose kubva kuChina, kuitira kuti ipe rubatsiro panguva yakakodzera kune vatengi vedu vepasirese.
Munguva imwecheteyo, Lumikko China kugadzirwa kwemuno kwakaonekwa apo yekutanga LT9 unit uye L6BHS yuniti yemuchina weLumikko weShanghai yakanga yabva pamutsetse wegungano.
SONGZ yakawana chikamu che55% muKeihin-Grand Ocean Thermal Technology (Dalian) Co. Ltd. , Iyo inoremekedzwa uye inotungamira kambani yeJapan inozivikanwa mune auto mhepo yekugadzirisa indasitiri.